तपाईंको ईमेल मार्केटिंग रणनीति कसरी सिर्जना गर्ने पछिल्लो मेलिiling डाटाबेस
घर » ईमेल डाटाबेस ब्लगहरू » इमेल मार्केटिङ » तपाईंको ईमेल मार्केटिंग रणनीति कसरी सिर्जना गर्ने
यदि तपाईं यो पोष्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईंलाई ईमेल मार्केटिंग कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ प्राप्त ग्राहकहरु र आय तपाईको मेलिंग सूची को लागी धन्यवाद।
पोष्टको यस अंशमा म त्यो मात्र व्याख्या गर्छु। सबै व्यावहारिक जानकारी तपाईंलाई आवश्यक छ कि आज देखि तपाईं आफ्नो ईमेल मार्केटिंग काम गर्न सुरु गर्नुहोस्।
तपाईलाई राख्नको लागि, मैले लेखको बाँकी अंश4प्रमुख सेक्सनमा विभाजन गरेको छु:
स्क्र्याचबाट तपाईको रणनीति बनाउनुहोस्।
स्प्याम बाधा पार गर्नुहोस्
तपाईंको ईमेलहरू खोल्नुहोस् (सबैभन्दा गाह्रो)।
तपाईंको ग्राहक सूची बढाउनुहोस्।
र अब, हो, हामी gut गर्न जाँदैछन् के ईमेल मार्केटिंग वास्तव मा छ।
# 1 रणनीति: ईमेल मार्केटिंगको 5Ws
तपाईंको रणनीति परिभाषित गर्न तपाईलाई केहि मुद्दाहरूको बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ:
यी5प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै तपाईंसँग रोडमैप बढाउन आवश्यक पर्ने सबै जानकारीहरू पाउनुहुनेछ।
1। को?: तपाईको आदर्श पाठक परिभाषित गर्नुहोस्
कुनै पनि मार्केटि। रणनीतिमा यो सँधै पहिलो चरण हो। र के यो हामीले हामीलाई थाहा पाउनुपर्दछ कि हामी को लागी जान्छौं जब हामी पोष्ट लेख्छौं, जब हामी इमेल पनि लेख्छौं हाम्रो आदर्श ग्राहक को हो भनेर जान्नु आवश्यक छ।
कारण सरल छ: यदि तपाईं आफ्नो अभियानहरू कसको लागि लेख्नुहुन्छ भनेर जान्नुहुन्न भने, तपाईं कहिले पनि सही सामग्री प्रस्ताव गर्न सक्षम हुनुहुन्न, उत्तम बिक्री ईमेल लेख्न वा विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईले हो, हो वा हो, यी डाटा:
तपाईको महत्वाकांक्षा र उद्देश्य के हो?
आजको दिन कस्तो छ?
तपाईको मुख्य समस्या के हो? अरु के "दुख्छ"?
तपाईंको सदस्यहरूको सूची तपाईंको दर्शकहरूको बिभिन्न रूचिहरूको आधारमा विभाजित गरिनु पर्छ । यो पोइन्ट महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले ईमेल लाई अनुकूलित गर्नु भएको खण्डमा लिनुहुन्छ।
2। किन?: तपाइँको लक्ष्य परिभाषित गर्नुहोस्
जब तपाइँको रणनीतिको योजना बनाउनु भएको छ2उद्देश्यहरूको प्रकारहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस्:
प्रत्येक ईमेलको लागि निर्दिष्ट।
उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको नयाँ ebook बेच्न को लागी एक अभियान सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ।
यसको लागि तपाइँले एक पोष्ट सिर्जना गर्नुभयो जुन तपाइँ विषयमा पुग्नुहुन्छ जसमा इन्फोप्रोडक्ट टर्न हुन्छ। र त्यो पोष्टमा तपाईंले फारम राख्नुभयो जुन एक अटोरेस्पोन्डरलाई ट्रिगर गर्दछ।
जे होस् तपाईको अन्तिम लक्ष्य बेच्ने हो, यस क्रममा प्रत्येक मेलको व्यक्तिगत लक्ष्य हुन्छ। म तपाइँलाई अनुक्रमको एक उदाहरण दिन्छु:
1 इमेल: तपाईं र तपाईंको प्रोजेक्ट प्रस्तुत गर्नुहोस्। उद्देश्य: विश्वास उत्पन्न गर्न।
2 इमेल: तपाईको ब्लगको बिभिन्न पोष्टहरुमा लि्क गर्नुहोस् जसमा तपाईले त्यस शीर्षकको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। उद्देश्य: मान थप्नको लागि, तपाईंको अधिकार बढाउनुहोस् र उत्पादनको लागि आवश्यकता सिर्जना गर्नुहोस्।
3 इमेल: तपाईंको ईबुकको सम्बन्धमा गहिरो सामग्री। यदि तपाईंसँग तिनीहरू छन् भने डाटा र तथ्या .्कहरू राम्रोसँग काम गर्दछन्। उद्देश्य: अधिकार प्राप्त गर्नुहोस् र उत्पादनको लागि आवश्यकता सिर्जना गर्नुहोस्।
4 इमेल: सफलता कहानी र उत्पाद परिचय। उद्देश्य: बिक्री को लागी प्रयोगकर्ता तैयार गर्नुहोस्।
5 इमेल: बिक्री ईमेल। उद्देश्य: बेच्नुहोस्।
तपाईंको ईमेल मार्केटिंग रणनीतिमा उद्देश्यहरू बारे जान्नु जस्तै हो कम्पास रहेको छ जसले तपाईंलाई काम गरिरहन मद्दत गर्दछ।
3। के?: सामग्रीको प्रकार
तपाइँको अभियानको उद्देश्य र तपाइँले पठाउन लाग्नु भएको ईमेलको विशिष्ट एकमा निर्भर गर्दै, तपाइँ एक प्रकारको सामग्री वा अन्य सिर्जना गर्नुहुन्छ। म तपाईंलाई सामग्री को उदाहरण दिन्छु।
लक्ष्य "मान थप्न": ती तपाईले आफ्नो खुला ब्लगमा लेख्नु भएको भन्दा बढी अनन्य सामग्रीहरू छन्। उदाहरण को लागी: विशेष उपकरण, टिप्स, तरिकाहरू, आदि को सूची।
लक्ष्य "ट्राफिक उत्पन्न गर्नुहोस्": यहाँ हामीसँग विशिष्ट न्यूजलेटर हुनेछ जसमा हामी ब्लगको समाचार वर्णन गर्दछौं। तपाईसँग पनि भिन्नता छ जुन तपाईले ईमेलको अनुक्रममा हेर्नु हुन्थ्यो विशिष्ट पोष्टर्सलाई उल्लेख गर्नु अघि जुन पाठकको लागि रोचक हुन्छ।
उद्देश्य "अधिकार": तपाईं पाहुना पोष्टहरू पठाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले प्रभावकर्ताहरूको ब्लगमा लेख्नुभएको छ वा योगदान प्राप्त सफलताको कथाहरूको लागि।
उद्देश्य "भरोसा निर्माण": यो राम्रो छ कि तपाईं आफ्नो परिचय दिनुहोस् र पाठकहरूलाई तपाईंको कथा भन्नुहोस्। समय समयमा यो पनि राम्रो छ कि तपाइँ एक ईमेल सम्मिलित गर्नुहोस् जसमा तपाइँ anecdote बताउनु हुन्छ। यो तपाइँको पछाडि मान्छे हेर्नको बारे हो।
तर सब भन्दा पहिले तपाईले एउटा कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने निर्णय गर्दै प्रासंगिक र उपयोगी सामग्री हुनु पर्छ।
सँधै सोच्नुहोस् कसरी तपाइँ आफ्नो ई-मेल प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको प्राथमिकता # 1 सँधै पाठकले चाहेको कुरा हुनुपर्दछ। ब्लगहरू भेट्टाउनु सामान्य छ जसको सामग्री एकदम राम्रो छ, तर तपाईले सदस्यता लिने बित्तिकै सबै आकर्षण हराउनुहुनेछ।
तिनीहरू एक पछि अर्को प्रस्ताव पठाउन रोक्दैनन् र उनीहरूले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न सक्ने सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा उनीहरूको न्यूजलेटर हो। र मलाई थाहा दिन यदि कसैले नयाँ पोष्ट प्रकाशित गरेको छ भने मसँग फिडली जस्ता उपकरणहरू छन्।
यदि उनीहरूले प्रस्ताव गर्नु पर्छ भने म सदस्यता रद्द गर्दछु।
तपाईका ग्राहकहरू तपाईको व्यवसायमा सब भन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् तपाइँको ग्राहकहरु पछि तपाईंले उनीहरूलाई प्रामाणिक वीआईपीको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।
4। कहिले?: पठाउने आवृत्ति
यो पठाउने फ्रिक्वेन्सी सबै अभियानहरूमा समान हुनु हुँदैन।
जबकि न्यूजलेटर हप्तामा एक पटक पठाउन सकिन्छ, त्यहाँ अन्य प्रकारका ईमेलहरू छन् जुन अर्को लय हुन सक्छ। मेरो नि: शुल्क प्रोब्लगिंग कोर्स हेर्नुहोस्।
← ईमेल मार्केटिंगका फाइदाहरू र बेफाइदा के हुन्?
डबल अप्ट-इन सुची →